Barcamp Yangon 2011 အတွက် Volunteers ခေါ်ယူခြင်း - MYSTERY ZILLION
Barcamp Yangon 2011 အတွက် Volunteers ခေါ်ယူခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီ 19, 20 တွင်ကျင်းပတော့မည့် Barcamp Yangon 2011 အတွက် Volunteers များကိုခေါ်ယူတော့ပါမည်။
Volunteers လုပ်ချင်သူများအနေဖြင့် www.barcampyangon.org တွင် Register ပြုလုပ်ရပါမည်။ ပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီ 10 ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် Pre-Barcamp သို့တက်ရောက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Pre-Barcamp နေ့တွင် တာဝန်များခွဲပေးပါမည်။
Pre-Barcamp သို့တက်ရောက်လာမည့်သူများအနေဖြင့် မိမိတွင်ရှိသော Internet သုံးနိုင်မည့် Devices များကို ယူလာပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(ကိုရာဗီ Tech Support Leader ,မှ MYSTERY ZILLION ကို devices 20 တောင်းထားပါတယ်။) ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ မသေချာဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။
အကို......အနော် တက်နိူင်တဲ့ ဘက်ကကူညီပါမယ်.........အိမ်မှာရှိတဲ့......Internet သုံးလို့ရတဲ့ Accessories အကုန်ယူလာခဲ့မယ်...စိတ်ချ.........
အေး လုပ်ပါကွာ ငါအတွက်တစ်ခုလောက်ပိုယူခဲ့ပေးပါနော်. သယ်ရင်း
Yeah!.....Let's go together to there.....And I will giveacalculator to u.......and then.....you must find the way to connect internet.......Ok?....my buddy..... A...ha...:P
အောက်ကလင့်မှာ Barcamp Volunteer အတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။
I'll be Volunteer, too.
Can't w8 no longer to join Barcamp Yangon 2011.
All volunteers will be old students form UCSY :P
T.K , [email protected] , Tsuna Lade , *(Txant)* are from UCSY.
၂ ရက်လုံးလာရမှာလား ... Register လုပ်ပြီးမလာဖြစ်ရင်ကော ? လာဖြစ်ဖို ့တော့များပါတယ် ..
Do volunteer need some special skills ? he he ..
When will the dead-line for volunteer registration ?
အရမ်းလုပ်ချင်နေရင် အရမ်းလာပေါ့ နော် ဟဲဟဲ
Room 205 ဆိုတာ building2Room5ကိုပြောတာလားဟင် .. ??? ပိန်းတယ်လို ့သတ်မှတ်လဲခံရတော့မှာပဲ .. ပြောပြကြပါနော် ..
(ကိုရာဗီ Tech Support Leader ,မှ MYSTERY ZILLION ကို devices 20 တောင်းထားပါတယ်။)
အဲ့တာ ဘာအတွက်လဲဟင် .....
205 ဆိုတာက Main Building ထဲကပါ။ အပေါ်ထပ် မှာပါ။
internet သုံးလို့ရမယ့် device တွေယူလာခိုင်းတာက အင်တာနက် ကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ပါ။ connection test လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ရက်နေ ့ကမအားလို ့မလာဖြစ်လိုက်ဘူး ... အမှန်တော့ရက်မှားသွားတာ ... ၁၀ရက်နေ ့ကို သောကြာနေ ့မှတ်နေတာ .. ကျောင်းကကိစ္စကို ကြာသပတေးနေ ့ချိန်းပြီးမှ ၁၀ရက်နေ ့ကကြာသပတေးမှန်းသိတယ် ... ဒါနဲ ့ပဲမလာဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုပါတော့ ..
Can i still do volunteer ?